Golaha Aqalka Sare oo qaadacay qorshaha muddo kordhinta | KEYDMEDIA ONLINE
Golaha Aqalka Sare oo qaadacay qorshaha muddo kordhinta
Waraaq ka soo baxday Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa looga soo hor jeestay qaraarkii ay maanta ansixiyeen Golaha Shacabka, waxaana lagu tlmaamay sharci darro.
MUQDISHO, Soomaaliya – Waraaq uu ku saxiixan yahay guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa lagu qaadacay muddo kordhin ay Xildhibaannada Aqalka Hoose maanta sameeyeen hay’adaha Sharci dajinta iyo Fulinta, taas oo Farmaajo u oggolaaneysa inuu muddo labo sano ah ku sii fadhiyo kursiga.
War saxaafadeedka ka soo baxay Guddoonka aqalka sare, waxaa lagu sheegay in Baarlamaanka 10-aad muddada xil heyn-tiisu ku ekeyd 27-kii December 2020, isla markaana aysan awood u lahayn dhaqan galinta sharciyo wixii markaas ka danbeeyay.
“Haddii muddo xileedka Dowladda dhamaado, iyadoo aan la diyaarin nidaam doorasheedkii dastuuriga ahaa ama qaab kale oo raali la isaga yahay, oo ku yimid heshiis siyaasadeed, awood ka heshiinta iyo qaabka doorashada loo gali lahaa waxa ay ku jirtaa wada hadalka DF iyo Dowladaha xubnaha ka ah”. Ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Guddoomiye Cabdi Xaashi.
Waxaa waraaqda lagu caddeeyay in go’aanka halka dhinac ah uu dalka u hor seedayo xasillooni darro siyaasadeed, khatarro amni iyo xaalado kale oo aan hadda la saadaali karin.
Waxaa laga digay in dalka dib loogu celiyo dagaallo sokeeyo, waxayna ku baaqeen in dalka aan laga leexin heshiiskii doorashada ee la gaaray September 2020, lagana waan toobo damaca qaldan ee muddo kordhinta.
Beesha Caalamka iyo guud ahaan daneeyayaasha Siyaasadda Soomaaliya ayay Guddoonka Golaha Aqalka Sare ugu baaqeen in ay soo fara galiyaan xaaladda ka sii dareysa ee Soomaaliya, inta aysan faraha ka bixin.